Inter Bank - 1aviagem.com
Gara aga post: Luxembourg - Grand Duchy nke ikpe-azụ
Nkwupụta ozo: Ihe ị ga-eleta na Riga? Obodo nke jikọtara ụlọ ọhụụ na nke ochie - Latvia
Edebere 23 October 2019 site Römulo Lucena
1- Gini mere m ji akwado Banco Inter?
Ọ bụrụ na ịchọrọ akaụntụ nyocha nke ndị Brazil maka ebumnuche ọ bụla, ma ị bi ebe a na Brazil, na-arụ ọrụ, ma ọ bụ na-abịa ọmụmụ, ma ọ bụ maka njem, ma ọ bụ iziga ma ọ bụ nata ego sitere na mba ofesi gaa Ndụmọdụ a bụ ka imepe akaụntụ gị na Banco Inter. Ọ bụ ihe dijitalụ niile ma ị naghị akwụ ụgwọ maka ndozi, ụgwọ kaadị, ma ọ bụ ụgwọ ụlọ akụ. Ihe ndekọ ahụ bụ n'efu yana ego mmezi ya bụ efu.
2- O kwere omume iji kaadị bank na mba ọzọ?
Ee, ewezuga akaụntụ dijitalụ o nwekwara kaadị kredit. Akwụkwọ ọkọlọtọ kaadị a bụ Mastercard. You nwekwara ike iji kaadị Inter Bank je mba ọzọ. Yabụ na njem mba ofesi ị nwere ike iji ọrụ kredit.
3- Gịnịkwa mere m ji na-azụ ahịa ahịa a niile na Banco Inter?
N'ihi na m na-eji ya, ọ na - enyere m aka ịchekwa ọtụtụ ego (na ụgwọ ndị na - enweghị isi) na oge (ịba ọcha na ụlọ akụ) ka m nwee ike ịga njem ndị ọzọ. Echere m na ọ nwere ike inyere gị aka n'otu ụzọ ahụ. Nke a bụ blog njem, yana ndụmọdụ gbasara njem, echere m na ego a nwere ike ịba uru!
Dịka ọmụmaatụ, tupu enwee akaụntụ m dijitalụ a chọrọ ka m kwụọ ụgwọ Doc ma ọ bụ TED na “nkata ọrụ” na aghotaghị m mana nnukwu bank ochie ahụ gbara m ume. Kwa afọ, ha tinyere ya na kaadị kredit Bans do Brasil, ana m atụfu oge na-eyi egwu ruo mgbe ha nwetara nke ahụ ụgwọ ezighi ezi. Ndị ọzọ karịa ịkwụ ụgwọ TED's 12,00 n'ihe banyere ịnyefe na akaụntụ akụ ọzọ. Kwa ọnwa ebubo ndị ahụ ruru $ 30,00 Nke a bụ ihe were ya iwe. Kwa afọ, ha na-anara m ihe dị ka R $ 360,00 nanị “ụgwọ ego na ụgwọ”. Nke ahụ bụkwa ọtụtụ!
Ruo mgbe m zutere Banco Inter, dịka 'onye ọkwọ ụgbọ mmiri oge mbụ' ọ bụla m na-atụ egwu, nke a ga-arụ ọrụ? Ọ na-arụ ọrụ n'ezie? Ọ ga-akwụ ụgwọ mgbe ọnwa ole na ole gasịrị? Anara m ule ahụ ma enwere m ya mma. Ma ọ dịlarị afọ ole na ole ma ọ nweghị ụgwọ ọrụ agbakwunyere. Ya mere agbagoro m na Banco Inter wee chekwaa ọtụtụ ego n'ime ọtụtụ afọ, nke mere na site na akụ na ụba a, amaliteworị m usoro njem ọzọ m ga-anwale kaadị ọhụrụ ahụ bịarutere.
O nwere teknụzụ na-enweghị kọntaktị, (nke ahụ pụtara na ị ga-eme ka kaadị ahụ dị nso na igwe ahụ, tinye paswọọdụ ọ na-akwụ ụgwọ ahụ).
Ọ bụ teknụzụ ọhụụ, ọ na-egosi na ụlọ akụ na-eweta ọhụụ na ịnabata teknụzụ ọhụụ.
4- N'azụ Kaadị
Ngwa mkpanaka, nke bụ iwu dịịrị ndị ga-eji ụlọ akụ Inter ebe ọ bụ na o nweghị alaka, bụ ihe na-eweta ezigbo ahụmịhe.
O nwere ebe a na-ere ahia (ebe izu ahia) n’ime ngwa n’onwe ya na-enye gi ego nzaghachi maka ndi n’ezuta ya site n’aka ndi ulo oru edebanyere aha ha. O nwere ike ịdị ka ihe dị ntakịrị, mana ọ bụghị. Nlaghachi ahụ dị mma karịa usoro mmemme iwu Iwu nke gọọmentị, ọ chọghịkwa idebanye aha mbụ, naanị zụta site na ngwa ahụ na "nnukwu ụlọ ahịa".
Ọ dị mma, ọ bụghị ihe niile bụ ifuru, dị ka isi ihe na-adịghị mma bụ okwu banyere enweghị ike ịfefe na kilomita na tiketi ụgbọ elu. Maka m, nke a bụ ọghọm ya bụ isi.
Ihe ọzọ ga - abụ nsogbu banyere ịhazi ego ịkwụ ụgwọ na akaụntụ ịkwụ ụgwọ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ anaghị enyere nhọrọ a aka. Eleghi anya obu nmekorita nke ya na ya. Dịka ọmụmaatụ, esi m Brasilia chọrọ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọkụ eletrik CEB. Maka ihe ụfọdụ, enweghị m ike ịkwụ ụgwọ akaụntụ ahụ site na Banco Inter. Aghọtara m na Bank si Minas Gerais, ya bụ, site na steeti ọzọ na obere ihe amabeghị na Brasilia. Ma enwere ike iwepu akaụntụ ahụ. Ikekwe n’ọdịniihu nke a ga-ekwe omume.
Ego ole ka m na-enweta maka mgbasa ozi Inter Bank?
Ee, ana m enweta otu ego ahụ ụlọ akụ na-ebo m! 😆. Gịnịkwa mere m jiri kpebie ikwu gbasara ya na blọgụ njem? N'ihi na ntum a nwere ike inyere gị aka. N'ezie ọ bụrụ na mgbe m hụchara post a Banco Inter chọrọ ịhụ ụdị nkwado maka blog a, m ga-enwe ekele maka ya. Mana ihe masịrị gị ka ga-adị maka sistemụ kilomita. Nke ahụ ga-abara mmadụ niile uru!
Igwe ego banki dijitalụ + Market Ebe ngwa + ọnụego efu + mbinye ego na-eweta ihe karịrị echekwa ego na-akwụghị ụgwọ = Interbank.
Iji mepee ụlọ akụ gị akwụghị ụgwọ pịa ebe a: Inter Bank
(Njikọ ntụgharị ahụ ga-abụ otu akwụkwọ ịkpọ oku enyi nke ngwa m).
Anọ m ebe a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ ya n'ihe ndị a na-ekwu ma ọ bụrụ na ọnụ ahịa a nyeere gị aka ma ọ bụ na ọ nwere ebe ọzọ na-efu. A mmakọ. 😎